देउसिरे होइन, वाइफार्इ ! - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
काठमाडौं । काठमाडौं : तिहार रङ, फूल, बत्ती र देउसीभैलोको पर्व । पहिले मादल ठोकेर, लेघ्रो तानीतानी भट्याउँदै देउसी खेल्ने चलन थियो । तर नयाँ प्रविधि र बदलिँदो जीवनशैलीले देउसी खेल्ने तरिका पनि फेरिएको छ । बलिराजाको अनुमति लिएर आएको जानकारी अब भट्याउनेले दिँदैनन् । बरु लाउडस्पिकरमा गीत घन्काउँदै आउँछन् । ढोकामा आइनपुग्दै सोध्छन्, ‘हजुर, वाइफाइको पासवर्ड के हो? ’
‘बलि राजाले पठाएको’ भन्दै देउसेले भट्याउनुमा पौराणिक किंवदन्ती छ । ग्वंगका अनुसार भगवान् विष्णुका भक्त प्रल्हादका नाति हुन्, बलि राजा । तीनै लोक जितेपछि दानवकुलमा जन्मिएका बलिमा अहंकार पैदा भयो । उनी महादानी थिए । उनको ख्याति र शक्ति बढ्दै जाँदा देउतालाई पनि असह्य भयो । देउताले गुहारेपछि भगवान् विष्णुले वामन अवतार लिए र छलपूर्वक तीन पाइला जमिन दान मागे । त्यो तीन पाइलामा स्वर्ग र मत्र्य मात्रै होइन, बलि राजा समेत रसातलमा भासिए । विस्थापित तिनै बलिको पुनर्वासका लागि उनको अनुमति लिएर जनताले घरघरमा गएर भन्न थाले, ‘देही श्री अर्थात् धन दिनुहोस् !’ यही शब्द पछि लोकलयमा रुपान्तरित हुँदै देउसिरे भएको मानिन्छ ।
संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी देउसीभैलो खेल्ने र आशीर्वाद दिने शैली फेरिँदै गएको स्वीकार्छन् । तर विकृति भित्रिएको भन्ने आरोपसँग उनी असहमत छन् । ‘शैली फरक भएको हो । सोच उही नै छ,’ उनी भन्छन् ।
तिहारलाई दाजुभाइ–दिदीबहिनीबीच मात्र होइन, छिमेकीसँगको सम्बन्धमा समेत न्यानोपन ल्याउने चाडका रूपमा लिइन्छ । तर मोबाइलमा झुन्डिने र इन्टरनेटमा मात्र रम्नेलाई यसको वास्ता हुँदैन । यो समस्याबाट किशोरकिशोरी बढी प्रभावित छन् । ‘छरछिमेक र दाजुभाइ–दिदीबहिनीबीच भएका मनमुटाव सुल्झाउने उचित समय हो यो । तर यसबेला पनि वाइफाइमै ध्यान जानु राम्रो होइन,’ मुटु रोग विशेषज्ञ प्रकाशराज रेग्मी चिन्ता व्यक्त गर्छन् । ‘वाइफाइ र मोबाइल भएपछि आपसमा मीठो कुराकानी गर्ने चलन घटेको छ । आत्मीयता साटासाट समेत हुन छोडिसक्यो,’ उनी भन्छन् । भेटघाट र कुराकानीले तनाव घटाउन सहयोग पुग्ने बताउँछन् डा. रेग्मी । थप्छन्, ‘देउसीभैलो खेल्दा होस् वा भाइटीकाको बेला, मोबाइल बन्द गर्नु उपयुक्त होजस्तो लाग्छ ।’ अन्नपूर्णपोष्टबाट